एक सय शैय्याको अस्पतालमा एकजना मात्रै विशेषज्ञ डाक्टर - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ सुदूरपश्चिम प्रदेश ∕ एक सय शैय्याको अस्पतालमा एकजना मात्रै विशेषज्ञ डाक्टर
एक सय शैय्याको अस्पतालमा एकजना मात्रै विशेषज्ञ डाक्टर
पदमराज भट्ट मंगलबार, २०७६ मंसीर ३ गते, १७:३५ मा प्रकाशित
धनगढी—दरबन्दीअनुसारका डाक्टर नभएपछि कञ्चनपुरको महाकाली अस्पताल सुनसान बनेको छ । सरकारले दरबन्दीअनुसारका विशेषज्ञ डाक्टर उपलब्ध गराउन नसकेपछि महाकाली अस्पताल सुनसान बनेको हो ।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार १७ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा हाल स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. हरिकुमार श्रेष्ठ मात्रै कार्यरत छन् । मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टका रुपमा रहेका डाक्टर श्रेष्ठको २ वर्ष पूरा भइसकेको छ भने समायोजनमा परेका डाक्टरसमेत हालसम्म अस्पतालमा आएका छैनन् ।
यता दरबन्दीअनुसार विशेषज्ञ डाक्टरको पदपूर्ति नहुँदा बिरामीलाई सेवा दिन समस्या हुनुका साथै अस्पताल सञ्चालनमै समस्या भएको महाकाली अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
सरकारले दरबन्दीका डाक्टर पठाउन नसकेपछि डा. धिरज जोशी र डा. मोहमद अहमद खानलाई अस्पताल विकास समितिका तर्फबाट राखिएको छ ।
एक सय शैय्या सञ्चालनमा रहेको यस अस्पताल भौतिक संरचनाअनुसार सुविधा सम्पन्न अस्पतालका रुपमा चिनिन्छ । तर, अहिले एक जना मात्रै विशेषज्ञ डाक्टर भएकाले बिरामीको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । बिरामीहरुले चर्को मूल्य तिरेर निजी क्लिनिक तथा भारतीय सीमावर्ती बजारस्थित अस्पतालहरुमा उपचार गराउनु पर्ने बाध्यता छ ।
प्रसुती सेवाका लागि धनगढी धाउनुपर्ने बाध्यता
महाकाली अस्पतालको सेवा खस्किदै गएपछि प्रसुती सेवाका लागि पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पुग्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ । महाकालीको सेवा प्रभावकारी नहुँदा विशेषज्ञ सेवा त परै जावस प्रसुती सेवाका लागि पनि कञ्चनपुरवासीले परनिर्भर बन्नुपर्ने बाध्यता बढेको हो ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा प्रसुती सेवा लिने झण्डै ५० प्रतिशत कञ्चनपुरका महिला छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा ५ सय ८९ महिलाले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा प्रसुती सेवा लिए । प्रसुती सेवा लिएका ५ सय ८९ जनामध्ये कञ्चनपुरबाट मात्रै २ सय ७५ महिला आएका थिए ।
एउटै स्तरको अस्पताल भएपनि महाकाली अस्पतालको सेवा खस्किदैं गएपछि प्रसुती सेवाका लागि पनि कञ्चनपुरवासीले परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता देखिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सुचना अधिकारी दिलिप श्रेष्ठले बताए । उनले सेती अस्पतालमा प्रसुती सेवा लिने महिलामध्ये झण्डै ५० प्रतिशत कञ्चनपुरकै रहेका बताए ।
यो तथ्यांकले प्रसुती सेवाका लागि महाकाली अस्पतालभन्दा पहाडी जिल्लाका अस्पतालको सेवा प्रभावकारी देखाएको छ । महाकाली अस्पतालमा अहिले मासिक दुई सय जनाले मात्रै प्रसुती सेवा लिइरहेका छन् ।
महाकाली अस्पतालले भने कैलालीको सीमा क्षेत्रबाट धेरैजना सेती अस्पतालमा जाने गरेको दावी गरेको छ । कतिपयले भने स्वस्फूर्त रुपमा रेफरसमेत माग्ने गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।
दरबन्दीअनुसार महाकाली अस्पतालमा डाक्टर नहुँदा सेवा खस्किदैं गएको महाकाली अस्पतालका सूचना अधिकारी केशवदत्त अवस्थीले बताए।